Izihlungi ezihamba phambili ze-AquaClear zama-aquariums, yikuphi okufanele ukhethe? | Okwezinhlanzi
Izihlungi ze-AquaClear zizwakala njenganoma ngubani oke waba semhlabeni we-aquarium isikhashana, ngoba zingenye yemikhiqizo edume kakhulu futhi enolwazi kakhulu ekuhlungeni i-aquarium. Izihlungi zabo zobhaka, ezaziwa nangokuthi izimpophoma, zaziswa kakhulu futhi zisetshenziswa ngumphakathi wonke.
Kulesi sihloko sizokhuluma ngokuhlunga kwe-AquaClear ngokujulile, sizoncoma amanye amamodeli awo, sizobona imininingwane yawo futhi sizokufundisa nokuthi ungawahlanza kanjani. Sincoma futhi ukuthi ufunde le ndatshana ehlobene nayo mayelana isihlungi se-osmosis se-aquarium, konke odinga ukukwazi.
1 Izihlungi ezihamba phambili ze-AquaClear
2 Isebenza kanjani isihlungi se-AquaClear
3 Izinhlobo ze-AquaClear Filter Replacement Parts
3.1 Ukuhlunga ngomshini
3.2 Ukuhlunga kwamakhemikhali
3.3 Ukuhlunga kwezinto eziphilayo
4 Ingabe i-AquaClear iluhlobo oluhle lokuhlunga lwama-aquariums?
5 Ingabe izihlungi ze-AquaClear zinomsindo?
6 Ungayihlanza kanjani isihlungi se-AquaClear
7 Kukangaki kufanele ushintshe imithwalo yesihlungi?
Izihlungi ezihamba phambili ze-AquaClear
Uhlelo lwe-AquaClear lwe ...
Ishaja Yokuhlunga ye-AquaClear ...
I-AquaClear Fluval Tube...
I-AquaClear A610 - Uhlelo ...
Ngokulandelayo sizobona ifayela le- izihlungi ezihamba phambili zalo mkhiqizo. Yize bonke babelana ngemininingwane efanayo futhi, nakanjani, ikhwalithi, umehluko ungatholakala kakhulu kumalitha aphezulu i-aquarium engaba nayo lapho sizofaka khona isihlungi kanye nenani lamalitha acutshungulwa ngehora:
Lesi sihlungi sifaka yonke ikhwalithi ejwayelekile ye-AquaClear, kanye nohlelo oluthule kakhulu, futhi izindlela zalo zokuhlunga ezintathu, zamanzi asedlula amalitha angama-76. Inezinga lokugeleza elisebenza ngaphezu kwamalitha angama-300 ngehora. Kulula kakhulu ukuhlangana futhi kungathathi ndawo.
Kulokhu kumayelana isihlungi esivumela ukufakwa kwayo kuma-aquariums kuze kufike kumalitha ayi-114, futhi lokho kungacubungula ngaphezulu kwamalitha angama-500 ngehora. Njengazo zonke izihlungi ze-AquaClear, ithule futhi ifaka phakathi izihlungi ezintathu ezihlukile (zemishini, zamakhemikhali nezokuphilayo). Nge-AquaClear amanzi akwi-aquarium yakho azomane acace njenge-crystal.
Le modeli yesihlungi se-AquaClear yi- ziyefana, kepha zinconyelwe ukusetshenziswa kuma-aquariums kuze kufike kumalitha ayi-190. Ingacubungula cishe amalitha angama-700 ngehora. Njengamanye amamodeli, i-AquaClear 50 ifaka ukulawulwa kokugeleza onganciphisa ukuhamba kwamanzi.
Futhi sigcina nge imodeli enkulu kunazo zonke yezihlungi zalolu hlobo, ezingasetshenziswa noma ngaphezulu noma ngaphansi kunama-aquariums kuze kufike kumalitha angama-265. Lesi sihlungi singacubungula nokushaya ngaphezulu kwamalitha ayinkulungwane ngehora. Inkulu kakhulu kunezinye, eqinisekisa amandla amangalisayo (kangangokuthi amanye amazwana athi ayilungiselele ubuncane).
Isebenza kanjani isihlungi se-AquaClear
Izihlungi ze-AquaClear ziyilokho eyaziwa ngokuthi izihlungi zobhaka. Lezi zinhlobo zokuhlunga zilungele ikakhulukazi ama-aquariums amancane naphakathi. "Zixhunyiwe" ngaphandle kwethangi, kolunye lwemiphetho engenhla (yingakho igama lazo), ngakho-ke azithathi isikhala ngaphakathi kwe-aquarium futhi, ngaphezu kwalokho, azinkulu njengezihlungi zangaphandle ezenzelwe ama-aquariums amakhulu. Ngaphezu kwalokho, baphonsa amanzi ngohlobo oluthile lwempophoma, okuthuthukisa umoya-mpilo wayo.
Isihlungi se-AquaClear sisebenza njengezihlungi eziningi yalolu hlobo:
Okokuqala, amanzi angena ngepayipi lepulasitiki bese ingena kusihlungi.
Khona-ke idivayisi yenza ukuhlunga kusuka phansi kuye phezulu futhi amanzi adlula phakathi kwezihlungi ezintathu ezihlukene (ezomshini, zamakhemikhali nezebhayoloji, esizokhuluma ngazo ngokuhamba kwesikhathi).
Uma ukuhlunga sekuphelile, amanzi abuyela e-aquarium, kulokhu ihlanzekile futhi ayinakho ukungcola.
Into ethokozisayo ngezihlungi zalo mkhiqizo omuhle kakhulu ukuthi zifaka, ngaphezu kwezihlungi ezintathu ezihlukene, a ukulawulwa kokugeleza onganciphisa ukugeleza kwamanzi kuze kufike kuma-66% (isibonelo, lapho wondla izinhlanzi zakho). Imoto yokuhlunga ayiyeki ukusebenza nganoma yisiphi isikhathi, futhi, noma ukugeleza kwehlisiwe, ikhwalithi yamanzi ahlungiwe nayo ayinciphi.
Izinhlobo ze-AquaClear Filter Replacement Parts
Njengoba sishilo ngaphambili, Izihlungi ze-AquaClear zinezinhlelo ezintathu zokuhlunga ukususa konke ukungcola wamanzi bese uwashiya ehlanzeke ngangokunokwenzeka.
Kuyinto ukuhlunga kokuqala okungena lapho isihlungi sisebenza khona, ngaleyo ndlela sibambe ukungcola okukhulu kakhulu (njenge, isibonelo, izinsalela zobulongwe, ukudla, isihlabathi esilengisiwe ...). Ngenxa yokuhlunga ngomshini, amanzi awahlali ehlanzekile kuphela, kodwa futhi afinyelela ekuhlungeni kwezinto eziphilayo ngendlela engcono kakhulu, isihlungi esiyinkimbinkimbi kunazo zonke futhi esibucayi salaba abathathu. Endabeni ye-AquaClear, lesi sihlungi senziwe ngogwebu, indlela engcono yokubamba lezi zinsalela.
Ngenhla nje kwegwebu elenza ukuhlunga kwemishini sithola ifayela le- ukuhlunga kwamakhemikhali, okubandakanya ikhaboni elicushiwe. Lokho okwenziwa yilolu hlelo lokuhlunga kususa izinhlayiya ezincane kakhulu ezincibilikiswe emanzini okungafakwanga yimishini ngomshini. Isibonelo, ilusizo kakhulu lapho ufuna ukuhlanza amanzi ngemuva kokuphuza izinhlanzi zakho, ngoba izosusa noma imuphi umuthi osele. Kusebenza nasekuqedeni iphunga. Lesi sihlungi asinconyelwe ukusetshenziswa kuma-aquariums anamanzi ahlanzekile.
Ukuhlunga kwezinto eziphilayo
Ukushaja kwe-AquaClear ...
Ekugcineni sifika ekuhlungeni okubucayi kakhulu, okungokwemvelo. Futhi amabhaktheriya ahlala eBiomax, amashubhu e-ceramic asetshenziswa yi-AquaClear kulesi sihlungi, anesibopho salokhu kuhlunga. Ama-bacteria abekwe kuma-canutillos anesibopho sokuguqula izinhlayiya eziza kuzo (ngokwesibonelo, kusukela ekuboleni izitshalo) zibe izinto ezinobuthi obuncane kakhulu ukugcina i-aquarium yakho isempilweni enhle nezinhlanzi zakho zijabule. Ngaphezu kwalokho, ukusefa okungokwemvelo okunikezwa yi-AquaClear kunethuba lokuthi kungasetshenziswa ezindaweni zasemanzini ezintsha nezisawoti.
Ingabe i-AquaClear iluhlobo oluhle lokuhlunga lwama-aquariums?
I-AquaClear ngokungangabazeki i-a umkhiqizo omuhle kakhulu wabaqalayo kanye nochwepheshe emhlabeni wama-aquariums. Hhayi nje ngoba ziwumkhiqizo onomlando omningi nokuthi uyatholakala nasezindaweni eziningi (kungaba ku-inthanethi noma ezitolo zezilwane, ngokwesibonelo) kepha ngenxa yokuthi imibono eyanda ku-inthanethi yonke inamaphuzu amaningi okuvamile: ukuthi ziyi-brand yakudala, enezihlungi eziningi zokwakha isipiliyoni, okuyikhwalithi ephezulu kakhulu futhi ibeka ukunakekelwa okuningi emikhiqizweni yayo.
Ingabe izihlungi ze-AquaClear zinomsindo?
Izihlungi ze-AquaClear zidume ngokuthula impela. Kodwa-ke, kujwayelekile ukuthi bakhale phakathi nezinsuku zokuqala zokusetshenziswa, njengoba kusadingeka bathathe ifilimu elithile.
Icebo lokuthi lingazwakali kangako ukuzama ukuthi isihlungi asiphumuli engilazini ye-aquarium, ngoba izikhathi eziningi yilokhu kuthintana okubangela ukudlidlizela nomsindo, okungacasula ngandlela thile. Ukuze wenze lokhu, hlukanisa okokuhlunga engilazini, ngokwesibonelo, ngokufaka izindandatho zenjoloba. Ukuma kwesihlungi nakho kubalulekile ukuze kungabangi umsindo ongaka, kufanele kuqonde ngokuphelele.
Ekugcineni, uma iqhubeka nokwenza umsindo omkhulu, kunconywa ukuthi ubheke ukuthi ngabe ikhona yini ezinye izinsalela eziqinile (ezinjenge-grit noma imfucumfucu) zahlala phakathi kwe-turbine ne-motor shaft.
Ungayihlanza kanjani isihlungi se-AquaClear
Izihlungi ze-AquaClear, njengazo zonke izihlungi, kufanele ihlanzwe ngezikhathi ezithile. Yize kufanele ukwenze kangaki kuncike kwi-aquarium ngayinye namandla ayo, uzokwazi ukuthi sekuyisikhathi sokuhlanza lapho ukugeleza kokuphuma kuqala ukwehla (imvamisa njalo emavikini amabili) ngenxa yemfucumfucu ebilokhu iqongelela.
Okokuqala kuzofanele ukwenze khipha isihlungi ukuze ungatholi inhlansi engalindelekile noma okubi kakhulu.
Ngemuva ukuqaqa izingxenye lemifanekiso (i-carbon motor, amashubhu e-ceramic kanye nesiponji sokuhlunga). Eqinisweni, i-AquaClear isivele ifaka ubhasikidi okhululekile lapho ukuhlanza konke kungathathi ngaphezu kwemizuzu emihlanu.
Beka ezinye amanzi e-aquarium esitsheni.
Kubaluleke kakhulu ukuthi usebenzise amanzi e-aquarium ukwenza hlanza isiponji nezinye izinto isihlungi. Ngaphandle kwalokho, uma ngokwesibonelo usebenzisa amanzi ompompi, lawa angangcoliswa futhi isihlungi sizoyeka ukusebenza.
Kubalulekile futhi ukuthi ukwenze futhi beka konke lapho bekufanele khonaNgaphandle kwalokho, isivalo ngeke sivalwe kahle, ngakho-ke isihlungi sizoyeka ukusebenza kahle.
Ekugcineni, ungalokothi uxhume isihlungi bese usisebenzisa somileNgaphandle kwalokho kunengozi yokuthi izoshisa ishise.
Kukangaki kufanele ushintshe imithwalo yesihlungi?
Ngokuvamile imithwalo yokuhlunga kufanele iguqulwe ngezikhathi ezithile ukuze isihlungi siqhubeke nokwenza umsebenzi waso kahle, ngaphandle kwalokho inani lemfucumfucu eliqoqekayo lingathinta kokubili ikhwalithi ye-filtrate nokugeleza kwamanzi. Yize, njengokujwayelekile, kuya kakhulu ngomthamo we-aquarium, okuvame kakhulu yile:
Shintsha ifayela le- isiponji njalo eminyakeni emibili noma kunjalo, noma lapho inamathele futhi yephuka.
Shintsha filtro de carbón isenzo kanye ngenyanga noma njalo.
I-Los Ama-grommets e-ceramic ngokuvamile akudingeki zishintshwe. Lapho ikoloni lamagciwane likhula ngokwengeziwe, ziyowenza kangcono umsebenzi wazo wokuhlunga!
Izihlungi ze-AquaClear ziyisixazululo sekhwalithi sokuhlunga i-aquarium yakho kokubili ama-newbies kulo mhlaba nakuchwepheshe, kanye nakwalabo abane-aquarium enobukhulu obulinganiselayo noma labo abangancintisana nolwandle uqobo. Sitshele, yiziphi izihlungi ozisebenzisayo ku-aquarium yakho? Ingabe kukhona okuncomayo? Yikuphi okuhlangenwe nakho oke waba nakho ngalo mkhiqizo?
Indlela ephelele ye-athikili: Okwezinhlanzi » Izesekeli » Izihlungi ze-AquaClear